तपाईको आज बुधवारको राशिफल भन्छ-आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा ! « Sansar News
तपाईको आज बुधवारको राशिफल भन्छ-आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा !
२२ मंसिर २०७८, बुधबार ०७:२१
रोकिएको काम बन्नेछ र उठ्नुपर्ने रकम प्राप्त हुनेछ। उद्योग र व्यापारमा पनि सामान्य फाइदा हुनेछ। विगतका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त प्राप्त हुनेछ। तर समयमा सजग नहुँदा आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। पुरानो समस्याले सञ्चित रकम खर्च गराउन सक्छ। चल–अचल धनको उपयोग गर्न सकिनेछ। पछिका लागि सामान्य लगानी गर्न सकिनेछ।
२०७८ मंसिर २२ गते, बुधवार, ८ डिसेम्बर २०२१
आज मंगलवार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात